Vehicle In Charge | Sweety Home ﻿
16.1.2019, Full time , Distribution / Logistic
•	မော်တော်ယာဉ်များအား နေ့စဉ် ဆီ၊ရေ၊လေ၊အင်ဂျင်ဝိုင်၊သန့်ရှင်းရေး စစ်ဆေးခြင်းများ ကြပ်မတ်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	မော်တော်ယာဉ်များ ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် စေ့စပ်သေချာစွာစစ်ဆေးပြီး အနီးကပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။
•	ယာဉ်မောင်းများမှတင်ပြလာသော ကီလိုမှတ်တမ်းများနှင့် ယာဉ်ပြင်ဆင်မှုများကို တိကျစွာ ကြည့်ရှုလမ်းညွှန်ပေးရမည်။
•	မော်တော်ယာဉ်များ သက်တမ်းလွန်မှုမရှိစေရန် ယာဉ်မှတ်တမ်းများအား ကြည့်ရှုဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
•	မော်တော်ယာဉ်များ သက်တမ်းတိုးပေးရခြင်း။အာမခံကိစ္စများ၊ လိုင်စင်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သတ်၍ အစိုးရရုံးဌာနများသို့ သွားလာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ယာဉ်ကိုယ်ထည် စတစ်ကာများအား လစဉ်၊ နှစ်စဉ် လဲလှယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။
•	ယာဉ်ေ်မာင်းများခရီးစဉ်နှင့် သုံးစွဲဆီ မှန်ကန်ရေး နေ့စဉ်ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။
•	လိုအပ်ပါက ဧည့်သည်ကားများ၊ဒါရိုက်တာကားများအား မောင်းနှင်လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးရခြင်း များအား ပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အသောက်အစားကင်း၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် (35) နှစ် မှ (45) နှစ် အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ(သို့) အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် ဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (5)နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
•	အိမ်စီးကားမျိုးစုံနှင့်လုပ်ငန်းသုံးကားမျိုးစုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်း အားလုံးနားလည်တတ်ကျွမ်းရမည်။
•	မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပတ်သတ်သော(အာမခံကိစ္စများ၊လိုင်စင်ကိစ္စများ၊အခြားအစိုးရဌာနဆိုင်ရာကိစ္စများ)အားဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်၍အလုပ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	အရက်သေစာ သောက်စားခြင်း ရှိသူမဖြစ်ရ။
Work location NO.296(A-12), AYEYAR WON MAIN ROAD,THAKETA TOWNSHIP,Yangon
Job posted: 16/1/2019
•	Effective communication skills, analytical and interpersonal skill
•	မော်တော်ယာဉ်များအား နေ့စဉ် ဆီ၊ရေ၊လေ၊အင်ဂျင်ဝိုင်၊သန့်ရှင်းရေး စစ်ဆေးခြင်းများ ကြပ်မတ်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	မော်တော်ယာဉ်များ ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် စေ့စပ်သေချာစွာစစ်ဆေးပြီး အနီးကပ်� ...
138 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	မန္တလေး စက်မှုဇုန်(၃)တွင် နေထိုင်သူများ ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူများ ဦးစားပေးမည်။
• Explains company personnel policies, benefits, and procedures to employees or job applicants. • Records data for each employee, including such information as addresses, weekly earnings, logistics, absences, counseling issues, and dates of and reasons for terminations. • Processes and reviews employment applications to evaluate qualifications or eligibility of applicants. • Answers questions regarding examinations, eligibility, salaries, benefits, and other pertinent information. • Examines employee files to answer ...
153 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။ •	အိမ်ထောင်မရှိသူဖြစ်ရမည် ။ •	အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည် ။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ အလုပ်ကိုကြိုးစားလို စိတ်ရှိရမည်။ •	ကြည့်မြင်တိုင် ၊ အလုံ ၊ လှည်းတန်းေ...
•	Coffee နှင့် Fresh Drink များကောင်းစွာဖျော်စပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ •	ယဉ်ကျေးချိုသာသော အပြုအမူရှိသူဖြစ်ရမည် ။ Location - Tharketa Living Mall, သာကေတမြို့နယ် ။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ရှိရမည်။ •	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
160 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	To Implement the company’s financial policies and objectives regarding production. •	To manage and organize the accountant section of the factory for smoothly run of daily work. •	To control bthe cost of the production by monitoring and reducing unnecessary costs. •	Acting as budget controller of factory for drawing, monitoring and reporting. •	To keeps accounts of stock. •	To monitor the usage of raw material and accounts of stock in various levels. •	To check the ground balances of raw material, work in progres and fin ...
•	Good at communication skill & negotiation skill •	Excellent at problem solving skill, reporting skill •	Able to lead and motivate the team •	Able to travel whenever required
•	Good communication skill •	Able to work independently •	Strong problem solving skill •	Competent knowledge in Java, OOP, MySQL, HTML, CSS, Java Script and Query •	Strong knowledge in Java EE, JSP & Web Services •	Analyze user requirements and design document •	Communicate effectively and professional with •	Preparation of customized crystal report for SAP user
•	Familiar with Social Media and Online •	Use database or willing to learn •	Interpersonal skills, communication skills, good analytical skill •	Creativity and problem-solving skills •	Teamwork and negotiation skills •	Can communicate with English Language
• ပြည်ပမှတင်သွင်းရောင်းချသော Hotel သုံး Product များအတွက် ဈေးကွက်ရှာဖွေပေးရမည် ။ • Client များနှင့် Hotel သုံး Product အကြောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမည် ။ • မိမိ၏ Team member များအားကောင်းစွာဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • Team member များအာ ...
Advertising Manager M (1)
•	Plan and manages advertising and promotional events. •	Plan to CSR Program as required. •	Gather and organize information to plan advertising campaigns. •	Creative and managing to the digital and online marketing. •	Plan and execute advertising policies and strategies. •	Plan advertising, including which media to advertise in, such as radio, television, print, online media, and billboards. •	Initiate market research studies and analyze their findings to understand customer and market opportunities for businesses •	Meet ...
•	ဧည်သည်များအား နွေးထွေးပျူဌာစွာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပြီးစိတ်ရှည်သီးခံရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ လုပ်ငန်းခွဲများသို့ လှည့်လှည်ကာ စာရင်းစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ •	သင်္ဃန်းကျွန်း၊ သာကေတ၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ကမာရွတ်၊ စမ်းချောင်း၊ လှိုင်မြို့နယ် နေထိုင်သူများ ဦးစားပေးမည်။
•	Able to lead and motivate the team •	Able to travel whenever required
223 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်၍ အလုပ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည် ။ •	အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းရှိသူမဖြစ်ရ ။ Maintenance (Car)
•	သင်ယူလိုစိတ်ရှိ၍ လူအများနှင့်အဆင်ပြေစွာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။
243 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	Monthly Payroll calculation with HR software for all employees •	Keep the record (Attendance,Leave,Overtime,) for all employees •	Arrange employee ID Card,Insurance and education supplies for all employees •	Responsible for recruitment and selection process for all showrooms and departments •	Prepared for yearly bonus list with service year for all employees by company policy •	Arrange the training for all employees •	Support to employees such as Health and Safety issue,SSB Service
•	Interpersonal skills, communication skills
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ •	Customer များနှင့် ယဉ်ကျေးချိုသာစွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိပါက နယ်ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။(မန္တလေး နှင့်ရန်ကုန်တ ...
•	နယ်ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ •	အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ •	Customer များနှင့် ယဉ်ကျေးချိုသာစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Marketing သင်တန်း certificate ရှိသူ (သို့)သင်တန်းတက်ေ ...
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	စာရင်းစစ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံရေးသားခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။
293 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	Competent knowledge in Java, OOP, MySQL, HTML, CSS, Java Script and Query •	Strong knowledge in Java SE,Java EE, JSP & Web Services •	Analyze user requirements and design document •	Communicate effectively and professional •	Preparation of customized crystal report for SAP user
298 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	Summary/Objective The human resource manager is directly responsible for the overall administration, coordination and evaluation of the human resource function. •	Essential Functions • Develops and administers various human resources plan and procedures for all company personnel. • Plans, organizes and controls all activities of the department. Participates in developing department goals, objectives and systems. • Implements and annually updates the compensation program; rewrites job descriptions as necessary; conducts ...
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။
•	Marketing နှင့် ပတ်သက်သော Diploma or Certificate တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ပါက ပို၍ ဦးစားပေးမည် •	အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရသူပို၍ဦးစားပေးမည်။ •	လိုအပ်ပါက နယ်သို့ခရီးထွက်နိုင်ရမည်။
•	ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ •	သင်ယူလိုစိတ်ရှိ၍ လူအများနှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းသင်း ဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။
•	Familiar with accounting software •	One years' working experience in related field •	Must have good personality & communication skill
359 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	To calculate complete set of payroll operation for staff by MS Excel •	To submit SSB fees in timely manners •	Maintains & filing all documents of HR administrative and personnel files •	To manage Employee leave taken list •	Preparation quarterly Leave taken report for all assigned Department •	To assist the recruitment process including cv collecting, screening, interviewing process •	Assist and follow orientation & training program •	Other related duty assigned by HR Manager & HR Executive
529 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	Must have knowledge in accounting software and Knowledge of taxation laws •	Over one year of experience in accounting field •	Must be computer literate and familiar with MS word, excel and e-mail
542 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ လုပ်ငန်းခွဲများသို့ လှည့်လှည်ကာ စာရင်းစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။
Vehicle In Charge Driver,Security & Cleaning jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon SWEETY HOME Driver, Security & Cleaning jobs Driver, Security & Cleaning jobs Vehicle In Charge Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
School Secretary (Chinese Myanmar)